कांग्रेसभित्रको विवाद कहिलेसम्म ?::Best Online News Portal of Nepal
कांग्रेसभित्रको विवाद कहिलेसम्म ?
बिहिबार, साउन २२ २०७७
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुन शुरु भइसकेको छ । कोरोना महामारीका बेला महाधिवेशन गर्ने भनेर कांग्रेसको कार्यतालिका संशोधन गरेर जारी गरिएको थियो । बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने भने जस्तै महाधिवेशन समयमा हुँदैन भनेर बोल्न कसैले सकेका छैनन् ।
त्यसको फाइदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले उठाएका छन् । अबको सात महिनाभित्र कांग्रेसको महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन । कोरोना महामारीका कारण जनताले धमाधम ज्यान गुमाइरहेका छन् । दैनिक ३–४ सय जना संक्रमित भइरहेका छन् । कोरोनाले मध्य र पूर्वी तराई तथा काठमाडौं उपत्यकालाई निशाना बनाएको छ ।
कोरोनाबाट आफ्नो जीवन कसरी रक्षा गर्ने भनेर दिनरात सोच्नुपर्ने बाध्यता भएका बेला कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन फागुन महिनामा हुन्छ भन्नु पत्यार नलाग्ने कुरा हो । रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर कोरोनाको महामारी काठमाडौं उपत्यकामा अनियन्त्रित रुपमा फैलिएको भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै भेटघाटहरू स्थगित गरेका छन् । पौडेल मात्रै होइन कांग्रेसका अन्य शीर्ष नेताहरूले पनि कार्यक्रमहरू स्थगित गरिसकेका छन् ।
महाधिवेशन समयमा नहुने भए नेविसंघ, तरुण दलका साथै विभागहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने एकथरीको माग छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरूलाई विस्तार गरिरहेका छन् । पौडेल–कोइराला समूहलाई ६०–४० अनुसार भाग दिइएको छ ।
नेकपाको दबदबा रहेका बेला कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू जुँगाको लडाइँ गरिरहेका छन् । पौडेल–कोइराला समूहमा उपगुटहरू रहेकाले ४० प्रतिशतमा आफ्ना नेताहरू व्यवस्थापन गर्न समस्या भएपछि देउवालाई असहयोग गरेको कुरा सबैले बुझेका छन् ।
आफूभित्रको विवाद मिलाउन नसक्ने देउवालाई पनि काम गर्न नदिने कार्य पौडेल–कोइराला समूहले तत्काल रोक्नुपर्ने कार्यकर्ताहरु नै बताउँछन् । देउवाले पौडेल–कोइरालाको भाग राखेर आफ्नो भागमा परेका विभागहरू धमाधम विस्तार गरेपछि पौडेल–कोइराला निकटका नेताहरू देउवाको ढोकामा पुगेका छन् । यद्यपी १४औं महाधिवेशनमा विभाग गठनको कुरालाई पौडेल–कोइराला समूहले एजेण्डाका रुपमा अगाडि बढाउन खोज्नुलाई सबैले राम्रैसँग बुझेका छन् ।
सभापति देउवालाई संसद बैठक बोलाउन माग गर्न नेता गुरुङको आग्रह
काँग्रेसका सबै सांसदले दशैँभत्ता फिर्ता गर्ने, काेराेनाकाे निःशुल्क उपचार गर्न माग
कांग्रेसले दसैँलगत्तै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, काेराेना नियत्रणमा गम्भीर नभएको आरोप
हुम्लामा चीनले सिमा मिचेको कांग्रेसको ठहर, कम्युनिस्ट सरकारमाथि राष्ट्रघातको आरोप
गगन थापाले भने- कुर्सी तोडफोड संसदीय मर्यादा र प्रतिष्ठा विपरीत
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक २५ गते सम्म स्थगित
राजधानी दाङ प्रस्तावविरूद्ध बुटवलमा बिशाल प्रदर्शन
जनभावनानुसार काम गर्न काँग्रेस नेता भण्डारीकाे सुझाव
दशैँको मनोवैज्ञानिक महत्त्व : चाडपर्वले मानसिक स्बास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव
सरकार अब त जनताको स्वास्थ्यमाथि पनि सोच्ने कि ?
दोहोरो मारमा बिद्यार्थीहरु : परिक्षाका साथै भाडा कसरी तिर्ने भन्ने तनाब
कोरोना प्रकोप अनि फिजियोथेरापि
कोभिड–१९ ले बदलिएकी गृहिणी ‘म’